Marathon International de Tana : ho avy ny Maorisianina sy Renioney | NewsMada
Marathon International de Tana : ho avy ny Maorisianina sy Renioney
Par Taratra sur 28/09/2016
19 andro mialoha ny hiatrehana ny “Marathon international de Tana”, isika anio. Efa mipetrapetraka ny fanomanana. Vonona ny atleta, hiatrika izany. Ho avy ireo atleta vahiny hifaninana amin’ny Malagasy.
Nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasin’ny atletisma, Ramanantsoa Andriamahazo Norolalao, fa efa ho avy handray anjara amin’ny Marathon international de Tana, andiany faha-16, tanterahina amin’ny alahady 16 oktobra ho avy izao, ry zareo Maorisianina, izay hisy atleta roa ary ny Renioney, manana enina, ka anisan’izany i Jean-François Lebon, nandrombaka ny andiany faha-15.
Eo am-piandrasana ny valinteny avy amin’i Afrika Atsimo kosa ny mpikarakara. Ankoatra izay, hisy vahiny hafa koa ho avy, dia i M’bar Ndiaye, tompondaka eran-tany amin’ny tae-kwon-do sy Laurence Fischer, tompondaka eo amin’ny karate. Tsy hifaninana amin’ny Marathon izy mianadahy ireo fa handray anjara fotsiny, amin’ny 10 km.
Hampiavaka ity Marathon international de Tana 2016 ity, ny fisian’ny Maratoons Land, toerana natokana ho an’ny ankizy sy ny fianakaviana. Misy kilalao isan-karazany sahaza ny kilonga izany.
Eo koa ny “cabaret” ankalamanjana, hataon’i Fanja Andriamanantena, izay mankalaza ny faha-50 taona niakarany an-tsehatra sy nilomanosany tao anaty mozika. Ny asabotsy alina ny hanaovana izany, eo an-tokontanin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Tsiahivina fa hahazo lelavola 1.500.000 Ar ny voalohany eo amin’ny Marathon international de Tana. Ankoatra ny Marathon, hisy koa ny “Les foulées écolo” mirefy 10 km sy ny handirun, ho an’ny olona sembana mirefy 10 km ihany koa ary ny Maratoons, hanana halavirana 1, 5 km.
“Mihazakazaka miady amin’ny sida”, ny teny filamatr’ity “Marathon international de Tana” ity.